Waa Gole kulmiya taageerayaasha kuwa hormoodka ka ah hoggaminta iyo guddoomiyanimada muj Muuse Biixi Cabdi ee xisbiga KULMIYE. Waa dad ka kooban dhammaan goballada dalka oo qabiilkeena waa KULMIYE sida magaca Kulmiye Clan sheegaayo. Fadlan ilaali warka aynu halkan isku dhaafsano. Ka ilaali inuu gaadho meel aan loogu talogalin. Siyaasaddu waa sir iyo is-aamin. Doodu waa mid furan oo loo siman yahay. Golahu waa mid xidhan oon u furnayn cid kale. Cidda golahan ku jirta oo keliya ayaa liska arki karta, email kasta oon soo qornaa waxuu ku dhacayaa emailka xubnaha si toos ah. Xubnahu wey soo jeedin kara in golahan cidi ku biirto. Waxa se go'aanka ka gaadhaaya maamulka kolka ay la tashadaan xubnaha.